प्रहरीको सक्रियतामा सल्यानमा बाल विवाह रोकियो
मिना बुढाथोकी सल्यान । सल्यानमा प्रहरीको सक्रियतामा सोमवार बाल विवाह रोकिएको छ । जिल्लाको कुमाख गाउँपालिकामा भई रहेको बाल विवाहको जानकारी पाए लगतै विवाह मण्डपमै गएर बाल विवाह रोकीएको हो
कर्णालीको हवाई उडान बन्द, यात्रु अलपत्र
बाँके । निरन्तर भारी वर्षाका कारण नेपालगञ्जबाट कर्णालीका पहाडी जिल्लाका लागि हुने हवाई उडान सेवा ठप्प भएको छ । वर्षाले नेपालगञ्जबाट कर्णाली क्षेत्रअन्तर्गतका जिल्लामा हुने सबै हवाई उडान सोमबारदेखि बन्द
बाढी, पहिरो समस्या समाधान अध्यादेश स्वीकृत
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश बाढी, पहिरो समस्या समाधान सम्बन्धी गठित अध्यादेश, २०७५, स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको
जाजरकोेटमा पहिरोले यातायात अवरुद्ध
जाजरकोट । बर्षासँगै गएको पहिरोका कारण जाजरकोटमा आन्तरिक तथा बाह्य यातायात सेवा ठप्प भएको छ । गएरातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण जिल्लाको अन्तरिक तथा बाह्य सडक यातायात अवरुद्ध भएको हो
हुम्ला । अक्सिजनको कमीले भारतको केराला मालापुरणकी ५६ वर्षीया लीला महेन्द्र नारायणको मृत्यु भएको छ । मानसरोवरको कैलाश यात्रा गरी आइतबार उहाँ हुम्ला आइपुग्नुभएको थियो । सिमकोट विमानस्थलका प्रहरी नायब
तुल्सीपुरबाट खलंगा आइरहेकाे बस रुकुममा दुर्घटना
रुकुम । रुकुम पश्चिममा सोमबार बिहान बस दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा १४ जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ । तुल्सीपुरबाट रुकुम पश्चिमको खलंगा
सिमकोट । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा हुम्ला जिल्लाका सरकारी कार्यालयको बेरुजु रु ३३ करोड ७२ लाख ५५ हजार ४३९ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । यो बेरुजु रकम जिल्लाका
रोकिएन डा. केसीको अनसन, थाले हिरासतमै(प्रेस विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले आमरण अनसन थाल्नुभएको छ । डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो तर, स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै अनसन
कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारी
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको “विनियोजन विधेयक २०७५” माथि दफावार छलफल प्रक्रिया जारी रहेको छ । बिहीबारदेखि सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र आन्तिरक